सम्झना ह’त्या प्रकरण- प्रहरीले निकाल्यो यस्तो निश्कर्ष, के छ पोस्टमार्ट रिपोर्टमा ? — Sanchar Kendra
सम्झना ह’त्या प्रकरण- प्रहरीले निकाल्यो यस्तो निश्कर्ष, के छ पोस्टमार्ट रिपोर्टमा ?
काठमाडौँ । बझाङको मष्टा गाउँपालिका २ की १२ बर्षीया बालिका सम्झना विकको ब’ला’त्का’रपछि ह’त्या भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार जिल्ला अस्पताल बझाङले प्रहरीलाई दिएको सम्झनाको पोस्टमार्ट अनुसार उनको बलात्कारपछि ह’त्या भएको प्रारम्भिक निश्कर्ष निकालिएको हो ।
ती अधिकारीले भने, ‘शनिबार आएको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा यो’ना’ङ्ग’मा घाउ भएको देखाएको छ, उनको टाउको, अनुहार, पिठ्यूँ लगायत शरीरका विभिन्न ठाउँमा चोटपटक छ ।’ ती अधिकारीका अनुसार बला’त्का’रीसँग प्रतिकार गर्ने क्रममा उनको शरिरमा चोटपटक लागेको देखिन्छ।
अहिले घटनाबारे अनुसन्धान गर्न बझाङका प्रहरी नायब उपरीक्षक रूपक खड्का नेतृत्वमा टोली खटिएको छ। घटनाको प्रकृति र स्थिति हेर्दा ब’ला’त्का’रपछि ह’त्या भएको उनले बताए।अहिले घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले सोही ठाउँका १८ वर्षीय राजेन्द्र बोहरालाई पक्राउ गरि अनुसन्धान समेत गरिरहेको छ । बोहरा यसअघि पनि विभिनन अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेको प्रहरीको दाबी छ।
गत बुधबार गाईबस्तुलाई घाँस हाल्न गएकी मस्टा गाउँपालिका २ की सम्झना मृत फेला परेकी थिइन्। बुधबार साँझ घाँस हाल्न निस्केकी सम्झना शव निर्वस्त्र सिमदेवता मन्दिरमा भेटिएको थियो। सम्झना मष्टा निमाविको कक्षा ६ मा अध्ययनरत थिइन्। उनलाई ब’ला’त्का’रपछि ह’त्या गरिएको भन्दै हत्यारालाई कारवाही गर्न शनिबार चैनपुरमा स्थानीय बासिन्दाले प्रदर्शन गरेका थिए।
यस्तै यता सुनसरीको बराह क्षेत्र नगरपालिका– १ कटहरेमा मृत अवस्थामा फेला परेकी १२ वर्षीया बालिकाको ब’ला’त्कार प्र’यासको प्रतिकार गर्दा ह’त्या भएको आशंका गरिएको छ । बाबु आमा छिमेकमा धामी राखिएको घर गएका बेला बालिकामाथि घरमै ब’ला’त्का’र प्रयास भएको र त्यसको प्रतिकार गर्दा उनको ह’त्या भएको प्रहरी स्रोत बताउँछ ।
ह’त्यामा संलग्नको आशंकामा प्रहरीले स्थानीय रञ्जित राईसहित ८ जनालाई प’क्राउ गरेको थियो । तर अरु ७ जना रिहा भएका छन् भने रञ्जितमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ । ‘शुक्रबार राति ७–८ जना युवकसँगै थिए, तर बालिका सुतेको कोठामा रञ्जित मात्रै प्रवेश गरेको देखिन्छ’ प्रहरी स्रोतले भन्यो ‘बालिकाले प्र’ति’कार गर्ने क्रममा हा’तमा टो’के’को देखिन्छ ।’
राति ११ बजे बालिकाको घरमा सामान किन्ने बाहनामा आएका रञ्जित झ्यालबाट बालिका सुतेको कोठामा प्रवेश गरेको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ । रञ्जितले घरेलु म’दि’रा सेवन गरेका थिए, बालिकाले हा’त टो’के’को रिसमा उनले बोतलले बालिकाको टाउकोमा प्रहार गरे ।
त्यसपछि घाँ’टी थि’चेर बालिकाको मृ’त्युपछि बाहिर निस्केको प्रहरी स्रोतको दावी छ । घटनामा रञ्जितको मात्र संलग्नता देखिएपछि अन्यलाई छाडिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रहरी उपरीक्षक कमल थापाले जानकारी दिए ।